Jean Omer Beriziky sur Facebook (2018-10-10 21:32:56) • Élection présidentielle
Jean Omer Beriziky sur Facebook (2018-10-10 21:32:56)
Ny CENI tsy mety hikitika ny lisipifidianana fa aleo hono misy fifidianana na ratsy ary. Ny mpifaninana mifandrovitra afisy sahady. Ny mpiandany ireo kandidà mifampiantsy. Manentana ny tsirairay haneho fahendrena hatrany fa mbola ho lava ny fampielezan-kevitra. Dia aza adino fa fampielezan-kevitra…
Robert Razafindramanana dit :
Izay tena mahay mangalatra e
Abdoul Ibrahim Hobaya dit :
11 octobre 2018 à 4 h 45 min
Tsisy varany n’y ezaka ataon’ny tomponandraikitra raha fanilihina n’y olompirenena mba tsy afahany hifidy no Iran fa mety. Date d’élection 7 décembre ve dia bloquer-n’a @mars n’y olona hafaka hifidy?Tsy olompirenena Malagasy manana n’y ZO-ny ve izany izay FENO 18taona taorianaMars?
Iarifina Marie Josu00e9e dit :
Marina ny an’ny CENI amin’ny lafiny iray,satria ny antony nanafainganana ny fifidianana dia noho ilay TOLONA izay fantatry ny maro fa manana kandida ireo mpitolona ireo.Ny TGVMapar,TIM no tena nitarika tao ka raha tsy ireo no milefitra mahaksika io fifidianana io dia:ahiana ny hampisy korontana,satria ny vahoaka no ampiasainy.Moa ve anisan’ireo kandida niaraka amin’ireo 22 nitaky farany ireo?